နိုင်ငံရေးသူငယ်နာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » နိုင်ငံရေးသူငယ်နာ
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Jul 1, 2014 in Politics, Issues | 36 comments
nld မှ nld တွေမျိုး
ဒေါ်စုက nld ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ ပါ။
၅၉ (စ) ကိုမပြင်ဘူးဆိုရင်
ခရိုနီ တရုတ် ကုလား သတင်း
သူငယ်နာကင်းစင် ပါတီ တစ်ခွင် သက္ကရစ် ၃၀၀၀ တွင်
………. ဆိုပြီး မွေးခါစကလေးတွေချည်းပဲ ပါတီထောင်လိုက်။
သက္ကရစ် ၃၀၀၀လောက်မှာတော့ သူငယ်နာစင်ကောင်းပါရဲ့။။
သငယ်နာစင်အောင် ဘရိန်းဝပ် လုပ် ထရိန်းထားလိုက်။
လွန်မယ် ဇီဇီ… ဘူမှန်းမသိပေမဲ့ တားပါရဇီ
နိဟာက မသိရင် ၀ပ်ထရိန်းဆိုတော့ သမဒကြီးခြံထဲက အကောင်အော်သံနဲ့များ တူနေသလားညော်…. :hee:
NLD က ခေါင်းဆောင်နဲ့ပါတီ မတူဝူးဆို… ဖွတ်တွေများညီချက် တစ်ယောက်က ပြောင်းဖူးကိုင် နောက်တစ်ယောက်က ဖယောင်းတိုင်ထွန်း နောက်ဆုံး လိတ်တက် ဆင်ပေါ်ကတောင် ပိဋကတ်သုံးပုံ သယ်လာလိုက်သေး… သူငယ်နာ စင်ပုံများ
ဒေါ်စု လဲ နဝတခေတ်မှာတုန်းက ထိပ်တိုက်ထိပ်တိုက်နဲ့
တိုက်ပိတ် အဲ အကျယ်ချုပ်ခံရတော့ဘယ်သူနစ်နာသတုံး??
angry bird က ဝက်ဆိုးသခိုးတွေကိုအပြုတ်မတိုက်နိုင်ပဲ ဂန့်သွားရတဲ့
ခန့်ခန့်က ကြီးမေနားမှာ အကြံပေးသွားလုပ်ပါ့လားလို့။
အိမ် က ဘိုနီထိသိဦးးး သူတို့ကို ခု တို့လိုကို မရသေးတာကို။ သိသားနဲ့ လူဇိုးးးး
ကြီးမေဟာကြီးမေ သူ့ အစီအစဉ်နဲ့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်နေတာကို ဘာတွေ စိတ်လောနေကြလဲ?????
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က လိုင်းပေါ်က အော်နေတဲ့ဟာတွေက တကယ် လုပ်နိုင်တဲ့သူဒေဟုတ်ဘူးးး
အဲတော့ လုပ်နေတဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့သူကို ဘာမှ မဝေဖန်ပဲ နေတာ အကောင်းဆုံးမို့လားးး
သူဖြင့် မိန်းမနဲ့တောင်တစ်ညမခွဲနိုင်ပဲ ကြီးမေကိုပဲ ပြောနေတယ်။
အောက်အရပ်မှာ နေသော သူကို မစ်တာပို့ပါဒယ်… မင်းကွန်းဆရာတော်နည်းအတိုင်း
အစိုးရမကောင်းကြောင်းကတော့ ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ပြရင် မပြောတော့ဝူး ဆယ်သက်
ဒေါ်စုတက်ရင် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ သွေးပျက်သူတစ်စုရဲ့ ခြိမ်း၆လုံးဒွေ ရိုးနေပါပီကွယ်….
အချိန်သိပ်မရလို့ ပြန်လာခဲ့မယ် စောင့်နေ
ခုတောင် ညက မန်းလေးမှာ
ရန်သူ ဂျပန်နဲ့ရော အင်္ဂလိပ်နဲ့ပါပေါင်းခဲ့ရသေးတာပဲ။
ပုံအပ်ပြီး Plan B မရှိခဲ့လို့
(ခေတ္တနားပါရစေ မောလို့ )
နာသိပ်မအားလို့ ကြောင်လွတ်လိုက်တယ် အောက်မှာဖတ်ကျိ….
မြန်မာပြည်မယ်.. အန်ဂျီအို..အန်ပီအိုတွေက.. ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်လေ့ကျင့်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်မယ်ထင်..
ပရိတ်သတ်က လက်အုပ်ချီပြီး အမေစု အမေစုနဲ့။
အစ်မတို့ခေတ်တုန်းက ဆိုရိုးစကားလို စကားတစ်ခွန်းတော့ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။ ဘုန်းကြီးလူထွက်ရယ်၊ စစ်သားလူထွက်ရယ်၊ ထောင်ထွက်ရယ်မှာ ထောင်ထွက်ကိုယူတဲ့။ အခုကလည်း မြန်မာပြည်အတွက်က အဲလိုမျိုး ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အခု ရှိနေတာက စစ်သားလူထွက်ရယ်၊ ဘုန်းကြီးလူထွက်ရယ်၊ ထောင်ထွက်(အကျယ်ချုပ်ထွက်)ရယ်။ တခြားလည်း ဘာမှမရှိတော့ ထောင်ထွက် က ပိုမကောင်းဘူးလား။
ခန့်ခန့် ပြောသလိုပဲ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ plan B ကလည်း မရှိ။
Wow says: ဒေါ်စုတက်ရင် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ သွေးပျက်သူတစ်စုရဲ့ ခြိမ်း၆လုံးဒွေ ရိုးနေပါပီကွယ်….
ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ အခုက တိုင်းပြည်က မရှုနိုင်မကယ်နိုင် အနေအထားမျိုး။ ချက်ချင်းကြီးတော့ အာဏာဘယ်သိမ်းမလဲ။ ခိုင်းစားလို့ ၀ပြီဆိုမှ သိမ်းမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်း ပြန်ချုပ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။
PLAN B ထွက်လာဖို့
PLAN A က
PLAN A က ရှေ့ကပိတ်နေသရွေ့
PLAN B ကထွက်နိုင်မှာမဟုတ်။
၄၃၆ ပြင်တဲ့ ကိတ်စ က ဒေါ်စု သမ္မတ ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ ထက် လွတ်တော်တွင်း တပ်မတော် အာဏာ လျော့ကျ ရေး ကို ဦးတည် တယ်လို့ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်…..
ကျွန်တော်က သာမာန်လူပါ…. အဲ့လောက် နားလည်ထားပါတယ်…
ဒေါ်စုက သမ္မတ ဖြစ်ဖို့၄၃၆ ကိုပြင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်လို့အစကတည်းက မမြင်မိပါဖူး….
ကျွန်တော် အမြင် မှားကောင်း မှားနိုင်ပါတယ်….
ဆက်ပြောချင်တာက NLD ရဲ့ ကိုထောက်ခံတဲ့ကိတ်စပါ….. ဒါကလည်း ရှင်းပါတယ်… ရည်းစားဟောင်းပဲ ထောက်ခံမှာပေါ့…. ရည်းစားသစ် ဖြစ်ချင်ရင် ကြိုးစားလေ… ပြည်သူက ငတ်နေတာပဲ… အချိုပေးရင် ရပါတယ်…. အောင်သိန်းလင်း လို့ တော့ မလုပ်နဲ့ ပေါ့…..
အမေရိကန်လည်း သူတို့ နောက်မှာ အင်မတန်မှ ကြီးမားတဲ့ သတိန်းကြီးတွေ ရှိပါတယ်… သူတို့ ကြောင့်လည်း နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေတာပါ…. ဘယ်သူတက် ဘယ်သူဆင်းနေတယ်ဆိုတာ အဲ့သထိန်းတွေက လုပ်နေတာလို့ ယုံကြည်တယ်…. ပြည်သူ ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ သူတို့ လုပ်လို့ ဖြစ်လာတာပါ… ကြားထဲက ဖောက်ထွက်လာတဲ့ လူတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်… မြန်မာပြည်လည်း အဲ့လို ဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်… ဒါပေမယ့် အဲ့လို မဖြစ်ပဲ တရုတ်လို့ ဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းဖူးပေါ့…..
မီဒီယာတွေ က အပုပ်သတင်းရေးတာတော့ အပြစ်ပြောမရဖူးဗျ…. ဒါက သူတို့ ဂျာနယ် ရောင်းကောင်းရေးပဲ…. နာမည်မရှိတဲ့သူတွေ ရေးတာ အလွန်ကျွံ ဖြစ်မယ်… နာမည်ရှိပီးသား သူတွေက ရေးတာ ကောင်းပါတယ်… အစိုးရ ကောင်းတာတွေလည်း ရေးရှာပါတယ်…. ဥပမာ အဝေးပြေးလည်း ကတ္တရာ ခင်းတဲ့ ကိတ်စ ရေးသားပဲ….. မင်းကိုနိုင်တို့ဦးကိုကိုကြီး တို့ အကြောင်းလဲ ရေးသားပဲ… သူတို့ တက်မလာတာတော့ မတက်နိုင်ဖူးလေ…. အစိုးကို အကောင်းမြင်တဲ့ သူတွေလည်း လူလက်တန်းစား အခြေံလူတန်းစား မှာ ရှိပါတယ်… သူတို့ သာ ဖြောင့်ဖြောင့် ဆက်သွားပါ… တချိန် အစိုးရကို အကုန် အကောင်းမြင်လာပါမှာ… ဒါပေမယ့် နှစ် လေးဆယ်လောက် ဖျက်စိး ခံလာရတဲ့ စိတ်တွေကို ငါးနှစ်နဲ့ တော့ ပြန်မကောင်းခိုင်းနဲ့ လေဗျာ… ခံရတဲ့ အနာက မုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့ အတိတ်လိုပဲ…. တရက် အနာက ဆယ်နှစ်နဲ့ ပျောက်ဖို့ မလွယ်ဖူး….. နှစ်လေးဆယ်အနာကို ငါးနှစ်နဲ့ အကောင်းစွက်မြင်ခိုင်းရင် တော့ နဲနဲ အချိန်စောသေးတယ်လို့ ထင်တယ်….. အခုနေ ဆေးခါးကြီး သောက်ခိုင်းတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့သူကို လက်ထပ်လို့ ပြောတာနဲ့ အတူတူပဲ… မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ပေါ့ဗျာ… ဘယ်လောက်ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်ပြောပြော… ဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်….
နိုင်ငံရေးသမား မွေးထုတ်တဲ့ ကိတ်စ နဲ့ ပတ်သက်ပိး သိချင်ရင်…..
အဲ့မှာ တချက်ကြည့်လိုက်ပါ….. အဲ့မှာ နိုင်ငံရေး သင်တန်းကြောင်းတွေ ဖွင့်ထားပါတယ်….
ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာက ဒေါ်စုကို သူ့ လက်ထပ်မှာ နောက်လူတယောက်ကို ပွဲထုတ်စေချင်တာပါပဲ…. NLD ပါတီကတော့ နေရာအားလုံး ရဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဖူး… ၂၀၁၅ မှာ ၀န်ကြီးနေရာအားလုံး ယူမယ်ဆိုရင်တောင် ကန့် ကွက်မှာပါ…. သူတို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်လို့ မထင်ပါဖူး…..
ကံ ကံရဲ့ အကျိုးပေါ့…. ပျက်တော့လည်း ဘာတက်နိုင်မှာလည်းဗျာ…. အကုန်လုံး အကောင်းဆုံးတော့ လုပ်နေကြပါတယ်….. သူငယ်နာ ဘယ်လောက် မစင်စင် ဆေးခါးတော့ စွက်သောက်ဖို့ မပြောပါနဲ့ ဗျာ… တခါတလေကျရင် ဆေးမသောက်ပဲ သေတာကမှ ကောင်းပါသေးတယ်……
အာ့ဒွေ အာ့ဒွေ နာ့ မောင် မိုးတိမ်မည်းကို ချိရတာ။
ပေါပလိုက်။ အမ စိမ်းသွားပေးတယ်။
အကောင်းမမြင်တာ ဆိုးတယ်လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေ လာမပြောနဲ့။
ဂနေ့အထိ အကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ထောက်ခံနေတဲ့ သူတွေရှိနေသေးလို့ ပြောနေရတာ။
ဒေါ်စုက အသက် ၇၀ ။
အနဲဆုံး ၈၀ အထိတော့မြန်မာပြည်အတွက် နေပေးမယ်လို့
ကိုင်းဒီတော့ ၂၀၂၀ မှာ ဒေါ်စုသမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်
ရောက်ဖို့ ခုကတည်းက ဆေးခါးသောက်ရမှာပါ။
ကျန်ပြား၇၀ လောက်က စစ်တပ်ထွက်
ခြစ်ကိုယ်ဂျီး မင်းကိုနိုင် ပြောသွားတယ်.. စစ်တပ်က သောက်အုပဒေနဲ့ အာဏာသိမ်းထားတာဒဲ့… ၁၉၈၈တုံးက လူထောင်ချီသတ်ပီး သေနတ်ပြ အာဏာသိမ်းဒယ်.. အခု စစ်ဗိုတမတ်သား လွှတ်တော်ထဲထည့် အဏာသိမ်းထားတယ်။ ဆီစွတ်ထည့်တာနဲ့ ဗလာချည်ထည့်တာပဲကွာတယ်.. ဆီမစွတ်ထည့်တော့ နာတာပေါ့ဗျာ.. ယနေ့လို ဆီလေးဘာလေးပါတော့ အချို့ဒွေအတွက် ချဉ်ပြုံးချဉ်ပြုံးလေး ဖြစ်မည်ထင်အိ..။ သို့ပေမည့် အထည့်ခံရဒါဂျင်းတော့ အတူတူဗဲ..။ တန်ရာတန်ဂျေးလေး ရလို့ ခံတယ်ဆို မပြောလိုဗူး.. နိုင်ငံရေးသမားအဖို့ နိုင်ငံရေးသိက္ခာမရှိ.. ပြည်သူလူထုဖို့ လူ့အခွင့်ရေး အာမခံချက်မရှိ.. အမျိုးဘာသာ သာသနာဆိုပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်ကလည်း ဘုန်းကြီးတွေဖမ်း လူဝတ်လဲ ထောင်ချ.. ကျောင်းသိမ်း.. ခုရော ထူးပါသလား.. ဝမ်ပေါင်အရေးအခင်းမှာ သံဃာတွေ မီးလောင်ဗုံးအပစ်ခံရ.. နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ် မဟာသတန္တိသုခ အရေးအခင်းမှာ လူဝတ်အလဲခံရ ထောင်ထဲအပို့ခံရ… မာမွတ်နဲ့ လျှာပွတ် အတူတူပါဗဲ။ ဒါကို အာဏာပျံသိမ်းမယ် ကြောက်နေတာ ရယ်စရာသိပ်ကောင်း ခွိ ခွိ ခွိ။ မထင်နဲ့ဗျို့ စစ်ကောင်ဒွေက ခုအခြေအနေ ပိုကြိုက်မယ်..။ အရင်လူတွေ စားလို့ဝါးလို့ အရိုးပေါ်အရေတင်လေး ကျန်နေဒါ သခင်ဂျီးတွေ ပေးကမ်းစာနဲ့ ပြန်ဝဖြိုးလာဒေါ့ ဘယ်မကြိုက်ပဲ ရှိပါ့မလဲ။ လက်ရှိ အနေထားအရ အဲဗရီးသင်း အန်ဒါ ကွန်ထရိုးလေ..။ ဘွားဒေါ်ဂျီး အူကြောင်ကြောင် လုပ်မနေ ပြတ်သားဖို့လိုတယ်.. နို့မို့လို့ဂဒေါ့ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်စတိုင် သောက်စည်းကမ်း ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက် ယက်ကန်ယက်ကန် သွားဂျဗေဒေါ့..
မီးခဲပြာဖုံး ဆိုတာက သက်မဲ့ မို့ ဒါမှမဟုတ် အစွမ်းရှိပေမဲ့ အစွမ်းမပြနိုင်လို့ အရှိန်ရလာအောင် ပြာဖယ် ပေးရတာပါ။
အများကိုခေါင်းဆောင်မဲ့ သူက သူများက ပြာဖယ်ပေးနိုင်မှ စွမ်းမတဲ့လား။
ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး သက်ရှိ လူ ကြီး တစ်ယောတ် ငုပ်နေတဲ့ အရည်အချင်းရှိသမို့ မီးခဲပြာဖုံးခေါင်းဆောင်လောင်းတွေ ရှာ ကြလို့ ပြောတာ ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဆိုတာ သူ့ဟာသူ ထွက်လာတာပါ။
တမင် မွေးပြီး ယူလို့ မရပါဘူး။
အောင်ဆန်း ဆိုတာ ငယ်ကထဲ က ရိုးဖြောင့်ပြီး မဟုတ်မခံ တိုင်းပြည်ချစ်သူ အဖြစ် ဇာတ်ရုပ်ပေါ်နေပြီးသားပါ။
အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာကလဲ တိုင်းပြည်အတွက် သူ့ကို အလိုရှိချိန် သုံးနိုင်အောင် အမြဲအဆင်သင့် ပြင်ထားခဲ့တဲ့ မိန်းမပါ။
တကယ်ဘဲ သူတို့ နေရာမျိုး မှာ “က” ချင်ရင် ရှေ့ ကို သူ့ဟာသူ ထွက်လာပြီး ဖြစ်နေမှာပါ။
နောက်တန်းမှာ ရှိုးတိုးရှန့်တန့် မထွက်ရဲ ဖြစ်နေသူ ကိုတော့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် မွေးဖို့ ဟိုအောက်ဒီအောက် တိုးပြီး မရှာ ပါရစေနဲ့။
တကယ် စွမ်း ရင် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
ရှာပြီး တင်ရတဲ့ မင်းလောင်း ကို တော့ မင်းအဖြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။
လိုတဲ့အချိန် သူ့ဟာသူ ထွက်လာနိုင်မှာပါ။
လောလောဆယ်တော့ ရှိပြီး သား ခေါင်းဆောင် ကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင် သူ့ဆီမှာ အာရုံစိုက်ပြီး သူ့ကိုဘဲ ဝိုင်းပြီး ပံ့ပိုးကြစို့လား။
ဒီအချိန်မှာတော့ ဒါကဘဲ အကောင်းဆုံး ဆေးပါ။
ဟိုဟိုဒီဒီ တောင်ရောက်မြောက်ရောက် တွေးရင်း လမ်းလွဲ သွားဖို့ ကို မလုပ်ချင်ပါနဲ့။
ကျွန်မ ကြားဘူးတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ
လွတ်လပ်ရေး ဆိုရာ၌ နေထိုင်ရေး လွတ်လပ်မှု၊ လူတစ်ဦး တစ်ယောက် အနေနှင့်လည်းကောင်း၊ တစ်မျိုးလုံး အနေနှင့် လည်းကောင်း၊
တိုးတက်ကြီးပွါးအောင် စီမံဆောင်ရွက် နိုင်အောင် လွတ်လပ်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စိတ္တ အဆင့်အတန်း တိုးမြင့်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် လွတ်လပ်မှု၊ စသည်တို့ ကို ဆိုလိုပေသည်။
ဤလွတ်လပ်မှု ရယူလိုမှု သည်ပင်လျှင် နိုင်ငံရေး ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရကား နိုင်ငံရေးသည် လူမှုလူရေး မျှသာဖြစ်သည်။”
(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း – ၁၉၄၆ခု ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်၊ အလယ်ပစ္စယံ ညီလာခံ မိန့်ခွန်းမှ)
ပါတီထောင် မှ နိုင်ငံရေးလုပ် တာ မဟုတ်နိုင်ကြောင်းလေး။
ဘယ် လူမျိုး ကိုမှ မစွဲချင်ပါဘူး။
မြန်မာဆိုတာ က သွေးပါပြီးမို့ ငါမြန်မာ လို့ ပြောခွင့်လေးတော့ပေးပါ။
ဘယ်ဘာသာ ကိုမှ မစွဲ ပါဘူး။
အလယ်အလတ်ကျင့်စဉ် နဲ့ သံသရာဖြတ်ဖို့ အေးငြိမ်းကြောင်းတရား ပြခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓ ကိုတော့ အမြဲဦးခိုက် နေပါရစေ။
ဘယ် ခေါင်းဆောင် ကိုမှ မစွဲ ပါဘူး။
အတ္တမကြီး ဘဲ ကိုယ်ကျိုး ကို စွန့် ကမ္ဘာက လေးစားလွန်းတဲ့ ရှားရှားပါးပါး မိန်းမတစ်ယောက် ကို တော့ လောလောဆယ် ဘယ်သူနဲ့ မှ အစားမထိုးပါရစေနဲ့။
(ကဘာ ဆရာမကြီး မြစာကလေး ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်)
မတူတဲ့ ဘက် က နေလဲ မြင်နိုင်အောင်ပါ။
အာဏာရှင်တွေ ရဲ့အာရုံက ဒေါ်စုအပေါ်ပဲ
သန်း၆၀ ကို ဖြိုတာနဲ့အတူတူဖြစ်နေတာ။
စရဖ မင်းကန့်လန့်ကျော် ပြောဗုံဂ လွဲနေဒရယ်… ဘောလုံးစဂါးနဲ့ပြောလျင် ရှူးဒေါ့ရှူးဒါဗဲ.. ဂိုးဗားပေါ် ဝါးတရိုက်အကွာရောက်နေ၏။ စစ်အာဏာရှင်ဒွေကြောက်တာ ဒေါ်စုထင်သလား.. နင်ပဲပြောတော့ ပုပ်ကိုယ်တဦးတယောက်အပေါ် အာရုံမစိုက်နဲ့ဆို..။ ဒင်းရို့ကြောက်တာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်၊ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း ဒေါ်စုလည်းမဟုတ်.. အန်အယ်လ်ဒီဥက္ကဌဘွားဒေါ်ဂျးလည်းမဟုတ်… တနိုင်ငံလုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ထောက်ခံထားတဲ့ အမေစုအဖြစ်နဲ့ဗျ။ ဒီလိုဗဲ ဒီမိုကရေစီပေးဖို့ တီဆားနဲ့တွန့်သလို ဖြစ်နေတာလည်း မဲပေးရွေးကောက်တဲ့စနစ်ထက် မဲအားလုံးအနိုင်ရသွားမည့် ဗွားဒေါ်ဂျီးကိုပဲ..။ လူနဲ့မူ တွဲမမြင်တာ အကောင်းဆုံးပေမဲ့ မြန်တျန့်ပြည်မှာ ဒီလိုဖြစ်နေတာ အရှိတယား.. နင်တို့ သတ်ပါတီဆိုတဲ့ တပ်သတိရ အင်အားစုတ်တွေ ရီယဲလတီ ပကတိအခြေအနေကိုလက်ခံပါဆိုတာ ဒါကြတော့ မသိခြင်ထောင် ဆောင်နေသလား။ ဘွားဒေါ်ကို မဲမပေးဖို့ ပါတီကို ဝန်းရံဖို့ဆိုတာ အခုအချိန်မှာ စစ်တပ်နဲ့ စစ်တပ်လိုလားသူတွေအတွက် စစ်အာဏာ ပျံမသိမ်းဂင် နောက်ဆုံးနည်းလမ်းဒွေဒဲဂ တခုဖြစ်တယ်။ လူထုအားကို ဖြိုခွင်းဖို့က အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ပဲ။ အကယ်၍ လထုဂျီးသာ လောက်လောက်လားလား ဂေါင်းဇောင်မဲ့နေကြည့်.. မဲဆန္ဒဒွေ ကွဲနေကြည့်.. အေဗေးစစ်ကောင်ဒွေ ဒီမိုကရေစီပါမယ် အသံကောင်းနေမှာ သေချာတယ်။ အကယ်၍သာ စစ်ကောင်ဒွေ ဒေါ်စုကိုသာ လက်မခံတာဆိုလျင် ၈၈အင်အားစု ခြစ်ကိုယ်ဂျီး မင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ ညှိလို့ရဒယ်။ ဒါမျုိးကြတော့လည်း မကြိုက်…။ ဒင်းတို့ မွေးချဉ်ထှာ ၈၈အမည်ခံ အေးလွင်လို့ ဂေါက်တောက်တောက်တွေ.. အန်အယ်လ်ဒီပဲ့ထွက် မစားရအမဲ သဲနဲ့ပက် အန်အယ်လ်ဒီပဲ့ထွက် အန်ဒီအက်ဖ်ကောင်ဒွေ..။ ဒါနဲ့ နင်အမ်ဒီဖက်တော့ မဟုတ်ပါဗူးနော်..
နောက်တခုက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကစလို့
အာဏာရှင် road map ကချထားတယ်ဆိုတာ
Good Morning ပါ။
သူကြီးပြောတာများ အဟုတ်မှတ်လို့ ကိုမင်းခန့်ကျော် ရယ်။
us ထက်တောင်အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေများတဲ့တိုင်ပြည်ကိုးး
ပြောနေရင်း အတင်းတုတ်မိပြန်ပါပြီ မနက်စောစောစီးစီး
ဒါထက် သများ က ကြောင်ကြီး မဟုတ်ဘူးနော်။ :-))))
ဘောပွဲ က ပယ်နတီ ပွဲ ဖြစ်တော့မယ် ထင်ရဲ့။
US ကလူဆိုရင်တော့ ဘောပွဲ စိတ်မဝင်စားတတ်ဘူးရှင့်။
.. ကို မင်းခန့်ကျော် စဉ်းစားတာတွေ ကျွန်တော်စဉ်းစားတာနဲ့တော်တော်တူပါတယ်..
– ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေး စဉ်းစားချင့်ချိန်မှုအားနည်းတာ
– ဘက် အစွဲသန်လွန်းတာ
– တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်တည်း ပုံအားပေး၊ အားကိုးတတ်ကြတာ
– ခေါင်းဆောင်သစ် နည်းတာ
– မီဒီယာတွေ ဖွဖို့ပဲအားသန်နေတာ
– အစိုးရကို အပြစ်ပြောတာရဲ့ အလွန် ဘာတွေလုပ်ကြမလည်း မစဉ်းစားဖြစ်တာ
စတာတွေပြောသွားတာ အမြင်တူပါတယ်.. ဒါတွေဟာ သိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်း ဟုတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးဟာ အပေါ်မှာ ကိုတိမ်မည်းပြောသွားတဲ့ နှစ် ၄၀ ဒါဏ်ရာ လက္ခဏာတွေလို့ပဲပြောရမယ်.. ချက်ချင်းတော့ မပျောက်လောက်ဘူးဗျ.. လောဘကြီးလို့မရဘူး..
.. ရေရှည်မှာ ဒီအချက်တွေ ပြင်ယူရမှာ မှန်ပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ဒေါ်စု အပေါ်အားကိုးမှုကိုတော့ လျှော့ဖို့ မလွယ်ဘူး (မလျှော့စေချင်ဘူး).. ဘောလုံးအသင်းတွေနဲ့ ဥပမာပေးရရင် တစ်သင်းလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ကောင်းတဲ့ (က) အသင်းဟာ ဝါရင့်ကစားသမား တစ်ယောက်တည်းပေါ်အားကိုးပြီးကစားရတဲ့ (ခ) အသင်းထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံအခြေအနေက (ခ) အသင်းလိုဖြစ်နေတယ် (က အသင်းလိုချက်ချင်းဖြစ်ခိုင်းလို့မရဘူး).. ဝါရင့်ကစားသမားကြီးနာသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ Plan B ထက် လောလောဆယ် သူကစားနိုင်တုန်း ဘယ်လိုနိုင်အောင် ကစားမလဲ ဆိုတဲ့ Plan A ကိုပဲ ဦးစားပေးနေရတယ် (ကစားရမယ့်ပွဲတွေက အရေးကြီးတာကိုး).. လူငယ်ကစားသမားတွေဆိုတာလည်း အထိုက်အလျောက်ခြေစွမ်းရှိမှ နေရပေးလို့ရမှာပါ..
– Plan A က Plan B ထက် ပိုမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ် (လက်ရှိအခြေအနေအရ)..
– ရေရှည် အတွက် Plan B ကလည်းစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်.. (ဒေါ်စုလုပ်နေတယ်ထင်ပါတယ်)
– Plan B အကြောင်းဆွေးနွေးရင် ဝါရင့်ကစားသမားကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေ ငြို ငြင်တာ ခံရတတ်ပါတယ်.. ဒါအတွက်တော့ အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်..
သူအသက်အရွယ်နဲ့က ၁၀ နှစ်လို့ပဲမျော်မှန်းနိုင်မယ်။
ကိုယ့်မှာ ကကြီးအသင်းနဲ့ ခခွေးအသင်းရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့သဘောမကျတာ ပြိုင်ဘက်ကအင်အားကြီး ချန်ပီယံကို
နှစ်တိုင်သိမ်းပိုက်ထားတာ။သူ့မှာက အသင်းကြီး သုံးသင်းစာလောက်
ပြိုင်ပွဲများလို့နဲနဲပန်းလာတဲ့ချန်ပီယံ ဒီတပွဲတော့ အေးအေးဆေးဆေး
ဒီအချိန်မှ အဓိကပလေယာတွေဒုတိယပိုင်းထည့် ။အချိန်ပိုနောက်ဆုံးမိနစ်မှာ
.. ကို မင်းခန့်ကျော်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်ပါတယ်.. ကျွန်တော် အရင်က ဒီမှာ ရေးဖူးတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုထဲက ဒီအပိုဒ်ဖတ်ကြည့်ရင် အမြင်ချင်း ဆင်တူကြောင်းသိမှာပါ..
”အမှန်တော့ နဂိုကတည်းက ပြည်သူအများစုဆီမှာ အကျိုးရှိမယ့် Constructive Idea တွေ၊ ဒီခရီးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ guide line တွေထက် တဖက်အုပ်စုကို ဘယ်လို တိုက်ခိုက်မယ်၊ လှောင်မယ်ပြောင်မယ်ဆို တာက ပိုအားသန်နေပါတယ်.. စာပေဟောပြောပွဲလိုနေရာမျိုးမှာတောင် Strategy ဆန်ဆန် အကြံဥာဏ်တွေ၊ အလားအလာ Vision တွေထက် အတိတ်တုန်းက အရင်အစိုးရမှားခဲ့တာတွေ အပြစ်တွေထောက်ပြတာမျိုး၊ သရော်တာမျိုးကို ပိုသဘောကျ၊ ပိုလက်ခုပ်သံရလေ့ရှိပါတယ်.. အဲဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်လေ့လာသူ တွေထက် သီးလေးသီးအငြိမ့်အဖွဲ့ လိုမျိုးကို လူပိုကြိုက်ကြတာပဲလိုပြောရပါမယ်.. မီဒီယာတွေဆိုရင်လဲ နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သတ်လို့ ပြည်သူကို ဦးဆောင်လမ်းညွန်မှုတွေလုပ်တဲ့အဖွဲ့က နည်းပြီး အများစုက ငါးပွက်ရာ ငါးစာချတဲ့သဘော ပြည်သူ့အကြိုက် လိုက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလှောင်တဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ဖွတဲ့ အင်တာဗျူးတွေ တွေ့လာရပါတယ် (ဆရာအော်ပီကျယ် လက်ရာမျိုးတွေလို ပညာပါ၊ တွေးစရာလေးပါတာမျိုးဆို ကောင်းပါတယ်).. ဒီနေရာမှာ ပရိတ်သတ်က တောင်းဆိုလို့ပါဆိုပြီး ပေါတောတောကားတွေပဲ လှိမ်ရိုက်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ သဘောချင်းတူမလားပဲ.. ဒီပုံစံ တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာရင် တချိန်ကအစိုးရသတင်းစာတွေမှာပါဘူးတဲ့ ဒေါ်စုဘာလုပ်လုပ်လှောင်ပြောင်သရော်ထားတဲ့ ဝါဒဖြန့် ကာတွန်း၊ ဆောင်းပါးတွေလောက် အဆင့်နိမ့်သွားပါလိမ်မယ်..”
ကိုမင်းခန့်ကျော်ပြောသလို ရှေဆက်ဘယ်လိုသွားမယ်၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ သုံးမယ်ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ် (အချိန်ရရင် ပိုစ့် တစ်ပုဒ်ရေးချင်နေပါတယ်) ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က သာမန်ပြည်သူထဲက ပြည်သူသာဖြစ်တော့ ဝါသနာအရ လျှောက်စဉ်းစားတာသာလုပ်နိုင်တာပါ.. တကယ်လက်တွေ့တော့ ကိုယ်ထက် စဉ်းစားဥာဏ်၊ စေတနာ အစစ သာမယ့် ဒေါ်စု ကိုပဲ အားကိုးထားပါတယ်..
ဒီလိုမျိုး ကျတော့်ထက်အစစအရာရာ အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့ရေးနိုင်တဲ့
ကျတော်စဉ်းစားပုံအထဲမှာ အဓိကအနေနဲ့ တိုင်ပြည်လက်ထဲ
ကျတော်စိုးရိမ်တာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲလို ဝင်မပြိုင်ဖြစ်မှာစိုးလို့
အထက်က ကိုဇော်သန့် ပြောသွားတာတွေ ဘောလုံးအသင်းနဲ့ ဥပမာပေးသွားတာ ရှင်းလင်းပီပြင်ပါတယ်။ အမလည်း စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ တိုင်းပြည်က ဘာမှလည်း တိုးတက်မလာသေးဘူး။ ဒီ ၂နှစ်အတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်း နှစ်ဆတက်သွားတာပဲရှိတယ်။ မအူပင်လို အစားအသောက်ပေါတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့မြို့တောင် အခု ကြက်သားကို ၁၂၀၀ ဈေးပေးဝယ်စားရတယ်။ တောကြက်ဥတစ်လုံး ၄၀၀ ပါ။ ငသလောက် တစ်ပိသာ နှစ်သောင်းဈေးပါ။ မြို့ ပေါ်မှာ ၁လုံး ၂လုံး ၃လုံး ခါတိုင်းလိုပါပဲ။ ဘာမှကို ထူးခြားပြောင်းလဲမသွားဘူး။ ကကြောင်ပြောသလို အဲဗရီးသင်း အစ် အန်ဒါကွန်ထရိုး။
ဆြာပု ပျောက်နေတာ ဆိုးတယ်။ သူဘာပြောမလဲ သိချင်တယ်။ ခုတလော အလင်းဆက်ကိုလည်း မတွေ့ဘူး။
ဒေါ်စုက လူထုကို လမ်းပေါ်တင်မယ့်သဘောဟန်ပြင်တယ်။
အစိုးရက မန္တလေးလမ်းပေါ် အရင်တင်တယ်။
အရင်တုန်းက us ကို မသွားမိတာနောင်တရချင်သလိုလို။
ဒီလို ပြန်ငြင်း လိုက်တာ ကို စိတ်မပျက် သွားပါနဲ့။
ရှင့် စိတ်ထဲ ယုံကြည်ရာကို ပြန်သာ ဝေဖန်ပါ။ ဆွေးနွေးပါ။
ကျွန်မ အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်မ တို့ အဝေးက လူတွေပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ တို့ နှလုံးသားတွေ က ပြည်တွင်းမှာဘဲ ရှိနေလို့ ဒီ ရွာထဲ မှာ ရှိနေတာပါ။
ကျွန်မလား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဘာဖြစ်ဖြစ် ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။
ကျွန်မ ဂရုစိုက်တာ တစ်ခါက ကျွန်မ ကြားခဲ့ တွေ့ခဲ့ ရတဲ့ တောရွာက ကလေးတွေ အတွက်ပါ။
ကျွန်မ အရင် က ကျောင်းအားတိုင်း အဖွာမြို့လေးမှာ ကလေးတို့ ဆရာမ လုပ်အားပေးပါတယ်။
ဆင်းရဲပေမဲ့ ရိုးသားလွန်းတဲ့ သူတွေ ကြားမှာ ကျွန်မ အရမ်းပျော်ခဲ့ဘူးတယ်။
မျက်စိ ရှေ့မှာဘဲ ကျောင်းမနေနိုင်တော့ ဘဲ မိဘ ကို ကူ နေရတဲ့ ကျောင်းတက်ချင်လွန်းနေဆဲ ကလေး တွေ အတွက် အားဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဘူးတယ်။
ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ သိလား။
စစ်ဗိုလ်ကတော် တွေကသာ ဒီလို လူမှုရေးအလုပ်တွေ လုပ်ခွင့်ရှိသတဲ့။
ဒါတင်လား ဆိုတော့ မပြီးပါဘူး။
အဖွား ရဲ့ ရေလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း လေး ကိုလဲ စစ်ပြန် စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ (အခု တော့ မရှိတော့ဘူးလားမသိ) က အနိုင်ကျင့် ဖယ်ပါတယ်။
လာပြီး ပြိုင်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အနိုင်ကျင့် ပြီး လုပ်ငန်း ကို ရပ်ခိုင်းတာ။
နောက်ပိုင်း သူတို့လဲ စနစ်ကျကျ ကောင်းကောင်း လုပ်မပေးနိုင်တော့ အရင်မော်တော်အကြီးကြီး တွေ နဲ့ ချောင်ချောင်လည်လည် သွားခဲ့ရတဲ့ ခရီး ကို ကြပ်ကြပ်သေးသေး ပဲ့ကျိတ် လို ဟာလေးတွေ သုံးရပါတော့တယ်။
ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နေသူ တွေ ကို ပံ့ပိုးဖို့ထက် သူတို့ လုပ်ခွင့်ပြဖို့ သာပါဘဲ။
တကယ် တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်လဲ ကျွန်မ တို့ လုပ်ငန်း ဆုံး ရတာ ကို ဖြေသိမ့်နိုင်ပါ့။
သူတို့ လက်ထဲ မြန်မာပြည်ဟာ ပိုပိုပြီး ဆိုးလာတာ။ မြို့ပေါ် တင်ကြည့်ရင်တော့ တိုးတက်တယ် ခေါ်ချင်ခေါ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မချစ်တဲ့ မြို့လေး ကတော့ ပျက်လုနေပါပြီ။
ကျွန်မ အဖိုး အဖွား လက်ထက်မှာ အင်မတန် စည်ကားခဲ့တဲ့ (ကိုယ်ထူကိုယ်ထနော်) မြို့လေး အခု အတော်လေး နိမ့်ကျခဲ့ပြီ။
ဒီလို ဆင်းရဲသား တွေ ကြည့်ရင်း တစ်ဖက် ကျွန်မ အသိုင်းအဝိုင်း ထဲ မှာ ပိုက်ဆံ တွေ သုံးမကုန် အောင် ရှိနေတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။
သူအား သူ့အင် နဲ့ရှာနေလို့ ချမ်းသာသူတွေ လဲ ရှိပါတယ်။
ပြည်သူ့ ဘဏ္ဏာ နဲ့ ကြွယ်ဝ သူတွေ လဲ ပေါပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ချစား မကင်းပါဘူး။
နောက် အစိုးရသစ် တက်လာလဲ ချစား မဲ့ သူတွေ စောင့်နေ ရှိနေမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို အများစုမဖြစ်သင့်ဘူး။ အရှက်ကင်းတဲ့ လူနဲစု သာဖြစ်သင့်တယ်။
ဒီအတွက် စံနမူနာကောင်း ခေါင်းဆောင် ကောင်း တစ်ယောက် ရှေ့မှာ ရှိပြသင့်တယ်။
ဒီလို ခေါင်းဆောင်ကောင်း နောက်မှာ ချစားလို့ မရရင် သူတို့ စည်းစိမ်ပျက်မစိုးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဖယ်ဖို့ လုပ်နေတာ မဟုတ်လား။
ချမ်းသာပြီး ပညာတတ်ပြီး လူများ ကတော့ ကျွန်မ ခံစားနေတဲ့ တောမြို့က လူတွေ အတွက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မထား တတ်ရင် ဘယ်သူ အာဏာရရ သူတို့ မှာ အထိအခိုက်မရှိ ပါဘဲ။
ဒီတော့ ကြားနေ တွေ များနေတာ မတရားသူ ကို ပိုပြီး ပံ့ပိုးနေခြင်းပါ။
လောလောဆယ် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းကောင်း နဲ့ အသိ ပညာဥာဏ်ပြည့်ဝ လွန်း နေတာ၊
ပြည်သူ တွေ ကို သူ့ကျောခင်းပေးနေတာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘဲ ရှိနေပါတယ်။
သူ့ ကို အားပေး ပံ့ပိုးခြင်းဟာ
ထင်းစည်းကြီးရွက်ပြီး သူများစာသင်တဲ့ ကျောင်းနားမှာ ခိုးနားထောင် ရင်း စာလိုက်ရွတ် နေတဲ့ ကလေးတွေ၊
ဆေးကုဖို့မပြောနဲ့ ထမင်းနပ်တောင် မမှန်လို့ အငတ်ဘေး နဲ့ သေခြင်း ကို စောင့်နေရတဲ့ လူအိုတွေ၊
အလုပ်အကိုင်မဲ့ အနာဂါတ်ပျောက် နေတဲ့ လူငယ် တွေ
အများကြီး အတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်းပါ။
ကျွန်မ ချစ်ခဲ့တဲ့ မြို့လေးကလူတွေ ကို သာမက တစ်ပြည်လုံး ကို ကယ်တင်နိုင်မဲ့ သူ ကို ရှာကြည့်ပါ။
ကျွန်မ တစ်သက်မှာတော့ တစ်ခြားဘယ်သူမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရာ ကို မရနိုင်တော့ပါဘူး။
ဒီလို လူ ကိုရှာလို့လဲ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
ဒီအတွက် တစ်ခြား ဘာမှမတွေး ဘဲ သူ့ ကိုသာ ပံ့ပိုးပေးကြပြီး သူပြောတာ နားထောင်ဖို့ပါဘဲ။
အရေးအကြီးဆုံး က ကိုမင်းခန့်ကျော် ရေ။
ဒီအချိန် မှာ လူတွေ ကို ကောင်းကောင်း ထိန်းနိုင်တဲ့ စနစ် ကောင်း တစ်ခု မရှိ သေးခင် ရှိ တဲ့ လူကောင်း ကို ဦးဆောင်ပြီး စနစ်ကောင်း စနိုင်ပါစေဦး။
မဟုတ်ဘဲ လူ စရှာရင်တော့ ဘာဖြစ်မယ် ထင်လဲ။
သူထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် စိတ်ဓာတ် တွေ အတ္တတွေ ထိုးတက် နေတဲ့ သူတွေ တက် လာတာဘဲ ရှင်မြင်ရလိမ့်မယ်။
အခုချိန်တော့ သူ့ဆီမှာသာ တိုင်းပြည် ရဲ့ “ကံ” ကို ပုံလိုက်ကြသင့်သလားပါဘဲ။
မဟုတ်လဲ ဒါထက် ဆိုးစရာရှိနိုင်သေးလို့လား။
ချမ်းသာသူတွေ က ပိုချမ်းသာပြီး ဆင်းရဲ သူတွေ က ပိုပြီး ဆင်းရဲ ဖို့ဘဲ ရှိပါတယ်။
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် လူတန်းစား တွေ က တော့ ၅၀/၅၀ ဆိုပါတော့။
ဒါကတော့ ပြည်တွင်း နေသူများရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒပါဘဲ။
ကျွန်မလဲ အဝေးကနေ လေဖော နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ကလဲ မြန်မာပြည် အတွက် ကိုယ်စွမ်းရှိသ၍ အလုပ်လုပ် ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
အနာဂါတ်မှာ လဲ ကိုယ်စွမ်းတာလေး တွေ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစား နေဆဲပါ။
လောလောဆယ်တော့ ရွာထဲ မှာ လေ နဲ့ ယင်ကောင် တွေ ပိုးကောင် တွေ မောင်းနိုင်မလားလို့ ယပ်တစ်ချောင်း ကိုင် လို့ စောင့်နေမိခြင်းပါဘဲ။
မှတ်ချက် – ကိုမင်းခန့်ကျော် စာ က သဘောမကျ လို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါ။
ရှင့် အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်မ မကြိုက် စကား နဲ့ ဘာသာပြန်သူ ရှိမှာ စိုးလို့ပါ။
သူတို့လဲ ကျွန်မ ကို တန်ပြန်ပြီး ကန့်ကွက် လို့ ရနိုင်တာပေါ့။
ကျွန်မလဲ ကျွန်မပြောတာ အဟုတ် လို့ မတွေးပေမဲ့ ကိုယ် ယုံကြည်ရာ ဘက်က ရပ် နေတဲ့ သဘောပါဘဲ။
ရှင်လဲ ကျွန်မခံစားမှု ကိုနားလည်နိုင်မယ် ထင်ရဲ့။
တစ်ချိန်မတော့ အမှန်မဟုတ်တောင်မှ သင့်တော်ရာလမ်းမှန် တစ်ခုပေါ်ရောက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခု ကိစ္စမှာလဲ အရင်ထက်စာရင် အများကြီး လူတွေ စဉ်းစားတတ်လာသလားလို့။
ဖွနေပေမဲ့ ဗြဲလရမ်း အရန်းကြီး ပွ မသွားတာ။
ဒီတော့ ကြားနေ ၅၀/၅၀ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် လူတွေ အနေအထားမှန်ရင် ကောင်းတဲ့ ဘက် ကို ပြောင်းမယ် လို့ ယုံကြည် နေတာပါဘဲ။
တိုင်းပြည် မပြောင်းတာ ကြားနေ ၅၀/၅၀ တွေ အနေအထားမမှန် နိုင်သေးလို့ လို့ မြင်မိလို့။
အနေအထားမှန် တယ် ဆိုတာက သူတို့ ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
နီးစပ်ရာ အမှန်တရား အတွက် ရပ်တည်ပေးနိုင်ဖို့၊ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ပါ။
ဟို ဘက် ပိုင်း နဲ့ ပိုနီး ရင်လဲ သူတို့ ကို ကိုယ်ချင်းစာတရား အသိဝင်ဖို့ ဖျောင်းဖြ သိမ်းသွင်း စည်းရုံး ပေးဖို့ပါ။
ဒါကတော့ မြန်ပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းမှာ မြို့တော်ကြီးတခုအသစ်
ဥာဏ်ကျယ် ဆိုတာ ကာတွန်းအောင်ရှိန် ရဲ့ ဇာတ်ကောင် ပေါ့ ကိုခန့် ရဲ့။ :-)))
အရီး အမြင် ကတော့ မျက်မှန်တတ်ကြည့်ရင် ကျယ်ပါတယ်။
ဘောပွဲ က ဇာတ်မြော နေလို့ ဝင် နောက်တာပါ။
အတည်ပြောရရင် ကျွန်မ က နိုင်ငံရေးအသိ မကြွယ်ပါဘူး။
ရိုးရိုးပြည်သူတစ်ယောက် အမြင်ကိုဘဲ စိတ်ထဲ ရှိရာ ပြောနေတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကန့်ကလန့်တော့ တိုက်တတ် တာမို့ ဆရာလုပ် ပြောသလို ဖြစ်ဖြစ်နေရင် နားလည်ပေးပါရှင့်။
ဖတ် ရင်း နဲ့ ကို မော သွား တယ် ဗျို့
အခု ရက် ဘော ပွဲ ဘဲ ပြော နေ ကြ တော့ ဘော စကားနဲ့ ဘဲ ပြော မယ်
မြန် မာ ဘော လုံး သစ် မှာ မျိုး ဆက် သစ် တွေ မွေး မ ထား တော့ အခု ဘာ ဖြစ် နေ သ လဲ
ဒါ ကို ကျ နော် တို့ န မူ နာ ယူ သင့် တယ်
အခု အချိန်မှာ နိုင်ငံေ၇း မျုိး ဆက် သစ် လေး တွေ ကို ချ ခင်း ပြ ရ မယ့် အချိ်န် ရောက် နေ ပါ ပြီ
ထပ်ပြော ချင် တာ က တော့ တစ် ဖက် သင်း ကို လဲ လျော့ မတွက် ပါ နဲ့
သိအိုရီပေါင်းစုံ စတာတွေ နဲ့လည်း
ဘာသဘောတရား ညာသီအိုရီ ဘာညာသာရကာအဖြစ်အပျက်
မိမိတို့စစ်တပ်အား ပြန်လှန် ထိန်းချုပ်မည့်အနေအထားသို့